News - HDPE ígwè belt mesikwuru gburugburu corrugated anwụrụ ahịa ngwa
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, site na iji usoro nchekwa nchekwa mba na mbenata mmetọ ikuku na mba ụwa lebara anya na akụnụba carbon dị ala, yana mmelite nke ndụ ndị mmadụ, ndị mmadụ etinyekwuola uche na ndụ obibi. Dika udiri ahihia ohuru ohuru, Pee sewage pipe na HDPE nchara belt mebere gburugburu corrugated pipe ejiri otu nnukwu ulo oru mmiri mmiri dika akwukwo igwe.
Pee nsị anwụrụ, HDPE ígwè belt mesikwuru gburugburu corrugated anwụrụ, magburu onwe ya eruba arụmọrụ, obosara eruba nso na ndị ọzọ pụrụ iche polima e ji mara, nke mere na Pee anwụrụ nwere magburu onwe nhazi arụmọrụ. Xinqihang Plastic Industry nwere ọtụtụ ụzọ na-akpụ drainage ọkpọkọ, dị ka ọgwụ ịkpụzi, ịkpụzi ịkpụzi, agụụ thermoforming, mkpuchi, rotational ịkpụzi, electroplating ụfụfụ, metal elu spraying, wdg. ngwaahịa nwere mgbidi na ndị chọrọ ike. A na-eji ihe eji agba ọsọ ọsọ iji mepụta akụkụ nwere mgbidi dị warara na ngwaahịa ndị chọrọ nhazi ngwa ngwa.
Iji mezuo ihe ndị dị mkpa nke usoro mmiri nsị nke ụlọ ọrụ, gụnyere nrụgide nrụgide, nchekwa, na ịdị jụụ, nnukwu ọkpọkọ mmiri mmiri Pee. Epeepe PE gbanwere ọkpọkọ ígwè mbụ na ọkpọkọ ọkpọ. Ebe ọ bụ na mgbidi dị n'ime paịpụ mmiri sefa nke nwere nnukwu larịị dị mma, ọ dịkwa ike n'oge echichi, ọ gaghị ewepụta nnukwu mkpọda iji mee ka ntanetị dị n'ime ụlọ dị elu. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụahịa nke ọkpọ mmiri nsị nke PE-nnukwu dayameta adịchaghị oke, si otú a na-ebelata ọnụahịa nke ọrụ ahụ dum.
A na-eme ka anwụrụ nsị nke PE dị na mpụga nke ihe ọkụkụ "green" na-adịghị egbu egbu, nke na-agaghị emetụta gburugburu gburugburu. Pee sewage pipe na-ebelata mkpọtụ nke drainage ma mepụta gburugburu ebe obibi dị mma karị. The eruba ndị na-eguzogide bụ obere iji gbochie fouling ma hụ oru oma na-eji ire ụtọ drainage. Ihe polyethylene PE nwere mgbidi dị larịị ma nwee ike iji wepụ mmiri mmiri PH2-PH12. Mmetụta akara ahụ dị ezigbo mma, ọ nweghị ohere ịpụpụ.